Macheena ma ubaahan yahay kaydinta daruuraha? | Waxaan ka socdaa mac
Macheena ma ubaahan yahay kaydinta daruuraha?
Javier Porcar | | macOS Sierra, dhowr
Suuqa dhexdiisa waxaa jira adeegyo kaladuwan oo lagu sameeyo nuqulo nuqul ah oo ah Mac-dayada daruuriga ah: Backblaze, Arq. Laakiin waxaan seegnay adeegga Apple oo si otomaatig ah nuqulo ugu sameeya nidaamka dhammaystiran ee daruuraha, qaabka gurmad iCloud, waxaan ku haynaa qalabka iOS. Ikhtiyaarkaan, waxaan ku kasbaneynaa, waxyaabo kale, amniga xogtayada, oo loo fahmay dhibaatada dhibaatada nuqulkeena nuquleed laga yaabo in laga sameeyay dariiqyada adag ee jirka, kuwaas oo guud ahaan ku yaal cinwaanka. Kaliya guuldaraysiga hababkaan ayaa ka dhigi doonta wax aan faa'iido lahayn, laakiin sidoo kale dab ama daad.
Maaha in la helo riwaayad, laakiin xilligan, Apple wuxuu na siinayaa awood aan ku kaydin karno faylasha aan ku hayno galka dukumiintiyada ama dusha desktop-ka. Marka hore, ma dooran karno feylasha ay isku mid yihiinHagaag, ama waanu nuqulaynaa galka dukumintiga oo dhan, ama midna kamaan nuqulayno. Marka labaad, ikhtiyaarka ugu fiican wuxuu noqon karaa in la sameeyo a nuqul ka sameyso daruuraha noo ogolaanaya inaan nidaamkayaga dib uga soo ceshano isla markaaba markaan koobiga ku sameyno nidaamkeena.
Waxaa laga yaabaa in maalgelinta xarumaha xogta ee Apple ay ka dhiseyso Mareykanka oo dhan, ay si sax ah uga jawaab celiso cabirka arrintan la xiriira. Laakiin haddii ay dhacdo, xaddiga macluumaadka loo baahan yahay in lagu kaydiyo qof kasta oo isticmaala ayaa ka sarrayn doona kuwa xilligan la isticmaalo. Sidaa darteed, su'aasha ah qiimaha keydkan ayaa soo ifbaxaya. Xilligan Apple waxay leedahay kala duwanaanta qiimaha soo socda: bilaash ilaa 5 GB, € 0,99 ilaa 50 GB, € 2,99 waa 200 GB iyo 2 TB waa € 9,99. Anigoon ogeyn sida loo bilaabi karo, laakiin aniga waxay ila tahay in eQorshaha loo baahan yahay waa inuusan ka yarayn 200 Gb.
Ma naqaano haddii Apple ay ka shaqeyneyso, laakiin waxaan fahamsanahay inay tahay inay bixiso taageero noocan ah, mana aha oo kaliya macaamiisha xirfadlaha ah, ee qorsheynaya fashilka qalabkooda, laakiin isticmaalaha caadiga ah ee aan rabin adag haddii ay dhacdo inaad khalad noocan ah leedahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Macheena ma ubaahan yahay kaydinta daruuraha?
Apple waxay aqbashaa deeqaha si wax looga qabto waxyeelada duufaanta Harvey
Beta 7 macOS High Sierra, Apple TV cusub 4K, processor Intel iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac